Horudhac: Chelsea vs Zenit St Petersburg… (Ole’olaha difaacashada tartanka Champions League ee naadiga Blues oo ka bilaabanaya London) – Gool FM
Horudhac: Chelsea vs Zenit St Petersburg… (Ole’olaha difaacashada tartanka Champions League ee naadiga Blues oo ka bilaabanaya London)
(London) 13 Sebt 2021. Kooxda difaacaneysa tartanka Champions League ee Chelsea ayaa caawa ciyaareysa kulankeeda ugu horreeya ee tartanka xilli ciyaareedkan iyadoo caawa dalka Ingiriiska kusoo dhoweyneysa naadiga Zenit St Petersburg.
Ciyaartan ayaa ka tirsan guruubka H ee tartanka horyaallada Yurub, waxayna Blues ambaqaadi doontaa safarkeeda difaacashada iyadoo xilli ciyaareedkii hore koobka 1-0 kaga qaadday Manchester City.
Garsooraha: Bartosz Frankowski (Poland)
Chelsea ayaa ciyaari doonta la’aanta matoorkeeda khadka dhexe ee N’Golo Kante kaasoo weli ku jira kasoo kabashada dhaawac kasoo gaaray ciyaartii Liverpool ee Premier League, si la mid ah Christian Pulisic oo dhaawac kala soo laabtay ciyaarihii qarammada ayaa seegaya kulankan, waxaase xiiso gaar ah leh inuu Macallin Thomas Tuchel safkiisa ciyaartan kusoo daray xiddigaha barxay ee Malang Sarr, Ruben Loftus-Cheek iyo Ross Barkley.
Zenit St Petersburg macallinkeeda Sergei Semak ayaa wajahaya caqabad xooggan oo dhanka dhaawacyada ah, waxaana kooxdiisa dhaawacyo awgood kaga maqnaan doona Dejan Lovren, Vyacheslav Karavaev iyo Magomed Ozdoev.
Waa markii ugu horreysay ee kooxaha Chelsea iyo Zenit St Petersburg isku arkaan tartammada Yurub, waxaana Blues ay ka heysataa rikoor guuldarro la’aan ah kooxaha Ruushka ka dhisan lixdii kulan ay kaga hor tagtay tartanka Champions League iyadoo adkaatay shan ka mid ah halka midka kalena ay barbarro gashay.
Dhinaca kale, naadiga Zenit ayaanan wax guul ah gaarin toddobadii ciyaarood ee ugu dambeysay Champions League iyadoo hal barbarro heshay, lixda kalena dhegta dhiigga loo daray, waana abaarteedii ugu dheereyd ee dhanka guulaha tartanka horyaallada Yurub, waxaana xusid mudan inay guul gaari weysey dhammaan lixdii ciyaarood ee wareegga guruubyada tartankan xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Chelsea ayaa guuldarro la’aan ah 11-kii ciyaarood ee ugu dambeeyay wareegga guruubyada Champions League iyadoo guuleysatay toddobo jeer, halka afarta kalena ay barbarro gashay, guuldarradii ugu dambeysay ee wareeggan kusoo gaartayna waxaa dusha u saaray naadiga Valencia xilli ciyaareedkii 2019-20.
Taariikhda Champions League, kooxda tartanka difaacaneysa ayaa guuldarro la kulantay ciyaarta ugu horreysa ee xilli ciyaareedka xiga kaliya labo jeer 27-ka jeer ee magacan lagu ciyaaray, waxayna guuldarrooyinkaas soo kala gaareen (AC Milan 1994-95 iyo Liverpool 2019-20).
Horudhac: Barcelona vs Bayern Munich... (Camp Nou oo soo dhoweynaya mid ka mid ah kulammada ugu waaweyn wareegga guruubyada Champions League xilli ciyaareedkan)
Horudhac: BSC Young Boys vs Manchester United... (Xiddig dhaawac looga reebay safka Red Devils iyo CR7 oo markale kooxdiisa u matalaya Champions League)